Voin-kava-mahatratra, hono, e!
2007-04-26 @ 07:09 in Kolontsaina
Dia rahampitso hariva moa izany no hanatontosana ilay fampisehoana heverina hanampiana ny mpiray tanindrazana tamin’ireo rivo-doza farany teo. Zava-panaon’ny Malagasy rahateo izany ho fifampitsimbinana eo amin’ny mpiara-belona. Malaza ho olon’ny fo rahateo isika ka izay manjo ny havana dia tahaka ny manjo ny tena ihany (moa tsy izany rahateo no dikan’ny lohateny ?). Tiako izany ny manamarika dieny mialoha fa ankasitrahako ilay fihevitra hanampiana ireo tratran’ny voina eto amin’ny firenena na dia efa tokony hisy ihany koa ny tetibola natokana ho amin’ireny voina ireny araka ny fahalalako azy.
Fa manahy dia manahy aho ny amin’izay mety ho vola voangona amin’io andron’ny rahampitso io. Artista maro moa no hanentana sy hifandimby eo an-tsehatra mandritra io fotoana io. Heverina sahady izany fa sarotra ny haka ny any ampaosin’ny olona amin’izao ka dia asiana famalifaliana izay olona tsara sitrapo aloha. Toy ireny hoe tsy maintsy misy takalo daholo ny zava-drehetra. Ambara isan’andro sy manana fotoana manokana indrindra amin’ny radio sy ny televizionam-panjakana moa ity fampisehoana heverina ho entina hanampiana ny rahalahy sy anabavy ity. Fa ilay fikarakarana mihitsy no misy olana amiko.
Voalohany, maro loatra ny artista handray anjara nefa ny sehatra tokana ihany. Tsy tian’ny mpijery loatra anefa, indrindra fa amoahany vola, ny hiandrasana mpisehatra iray ankafizina mihira hira roa raha be indrindra dia izay no izy, tsy azoazony loatra ny hafa ohatra. Efa fantatra manko fa hira iray ihany no tena iraisana fa ny ankoatra izay dia mifandimby. Ny tamin’ireny fetim-pirenena ireny anie ka fialam-boly tsy ialam-bola ka dia mijanona ny olona fa ny handaniam-bola no hifandimby tahaka izany dia manahy ny tsy fahombiazana aho.
Faharoa, eo amin’izay fifandimbiasana izay indrindra dia samy manana ny fahaizany mitendry ny mpitendry ny zavamaneno. Samy manana ny hanaovany ny lakilen’ny hirany. Eny, mety ho samy manana ny zavamaneno manavanana azy ihany koa aza. Izany hoe na dia ilay fifandimbiasana aza izany dia efa mety ho fandaniam-potoana tsy amin’ny antony. Eo no tena miasa ny mpanentana amin’ny famenoana ny banga. Raha 16 ny isan’ny artista hifandimby dia tokony hieritreritra ny resaka rehetra atao ao anatin’ny fifandimbiasana in’16 izany ny mpanentana. Izaho anefa efa nandre ihany ny Foy hehy manentana fa tsy ankafiziko loatra ny fanaovan-dry zalahy azy. Misy ihany ny tsara ataony fa be loatra no tsy azoazon’ny aiko izany ny mihaino azy, izaho izay malala-kevitra be ity !
Tsy mety ny mitsikera fotsiny fa ny soso-kevitra (efa tara be !) no atolotro. Misy gadona samihafa ihany ny hira ary raha azo natao ihany koa aza dia misy ny fahiny sy ny ankehitriny. Raha olona malala-tanana no tena tadiavina dia olona efa lehibe no tena andrasana amin’izany, manana ny karazan-kira tiany ireny olona ireny ary amin’ny ankapobeny dia tsy mahazaka loatra ny tabataban-kira ankehitriny sy ny mozikany ry zareo. Tokony hanana efitra manokana ho an’ny tia azy ny kalon’ny fahiny. Misy ihany koa ireo tia ny hira mafana fotsiny ka mandihy no tena tiany, tsara mba manana ny efitra ho azy koa ireny karazan’olona ireny. Tsy azo adinoina ihany koa fa manana ny mpankafy manokana anie ny gadonkira rock maro isan-karazany, amin’ny ankapobeny aza dia tsy tian’ny hafa loatra ity gadonkira io nefa azo omena ny anjara masoandrony ry zareo amin’ny fandraisana anjara.
Ary farany eo koa ireo tia hira somary mandangolango ary hira henoina tonony no tena ankafiziny tsara mba omena ny sahaza azy. Efa nisy ny nanao toy izany tao amin’io Lapan’ny kolontsaina io matoa aho nanoratra etoana. Tsy voatery hijanona amin’ny efitra iray anefa ny mpijery fa afaka mivezivezy amin’ireo efitra telo ireo araka izay tiany rehefa tafiditra tao anatin’ny tamboho fotsiny izy.
Soso-kevitra hafa azo atao ihany koa na dia mety hiteraka adi-hevitra hafa aza dia ny fanaovana ny fampisehoana andro samihafa mihitsy. Fanaon’ny mpanakanto ny manao fampisehoana andro mitohy ka eo ny Zoma alina. Fampisehoana hafa ny Asabotsy tolakandro nefa amin’ity indray mitoraka ity tsy miverina intsony ilay mpihira nihira ny omaly. Ary fampisehoana hafa amin’ny gadona mitovitovy ihany koa ny alahady tolakandro. Amin’izay fotoana izay indray dia afa-po kokoa ny mpijery ary afaka manao hira maromaro kokoa ny artista iray fa tsy ho zara raha mihira roa dia samy miala tahaka ny ala safay sy fomba fotsiny. Eritreritra iray hafa koa ny amin’iny nefa efa tsy fotoanany intsony angamba na mikarakara fampisehoana hafa mihitsy e ! Na izany na tsy izany dia mirary fahombiazana hatrany amin’ny fikarakarana ny fampisehoana rahampitso hariva ny tenako.